कोभिड : कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ? डा. रवीन्द्र पाण्डे – मिलिजुली खबर
भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालको चाँप, मृत्युदर तथा घाटका दृश्य देखेर हामीहरुलाई तनाब भएको छ । महामारीको समयमा यस्ता समाचार नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपालमा अक्सिजनको कमी भइसकेको छैन । सबै संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिने पनि हैन । आइसीयु तथा भेन्टिलेटर खाली नभएका समाचारले पनि असुरक्षा महशुष गराएका छन् । सरकारले अक्सिजन बेड, आइसीयु तथा कोभिड अस्पताल थपिरहेको छ । विपत्तिको समयमा डराउने / आत्तिने हैन, कुशलतापूर्वक अघिं बढ्नुपर्दछ ।
अहिले परिस्थिति २० बिग्रेको छ भने हाम्रो मनस्थिति ८० बिग्रेको छ । संचारमाध्यमले पनि मनोबल बढाउने समाचार दिनु उपयुक्त हुन्छ । नकारात्मक समाचारको महामारी झनै घातक हुन्छ ।
– पिसिआर पोजिटिभ हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन । तापक्रम ९९.५ भन्दा माथि भएमा पारासिटामोल खान सकिन्छ । खोकी लागेमा एलर्जीको औषधि खान सकिन्छ । पखाला लागेमा प्रोबायोटिक खान सकिन्छ । जीवनजल पर्याप्त खानुपर्दछ ।
– यदि अक्सिजनको स्तर ९० बाट तल झर्यो भने, सास फेर्न गाह्रो भयो, शरीर सिथिल भयो तथा खान नसक्ने अवस्था आयो भने तुरुन्तै कोभिड अस्पतालमा जानुपर्दछ । भरे वा भोलि जान्छु भनेर पर्खिनु हुँदैन ।
– अहिले पनि ८५ % संक्रमितलाई घरमै बसेर निको भएको छ । १५ % लाई अस्पतालको सुबिधा आबश्यक देखिएको छ । ५ % लाई आइसीयुको आवश्यकता परेको छ । मृत्युदर १ % मात्र छ |
बेथानचोकका एक युवाद्वारा झुण्डिएर आत्महत्या
धुलिखेलको हरिसिद्धि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्द